FreeOffice 6.2.2 Ikozvino Yava Kuwanikwa, Inosvika Neye Bug Kugadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Shanduro v6.2.1 yakaburitswa masvondo matatu apfuura uye nhasi, kambani yakafara kuzivisa iyo LibreOffice 6.2.2 kuburitswa. Iyo inonyanya kuve vhezheni yekugadzirisa zvikanganiso, zvakanyanya zvekuti iyo yakakurudzirwa vhezheni ichiri v6.1 iyo inosanganisira mashoma nhau asi zvakare yakagadzikana. Inowanikwa kune ese anotsigirwa masisitimu anoshanda asi, senguva dzose, haisati iri mune chero repamutemo repamutemo. Panguva yekunyora uku, vhezheni yepamusoro-soro-dheti senge snap package ndeye v6.1.2.2.
Sezvo isu tichigona kuverenga mu ruzivo ruzivo pane kuvhurwa kwayo, FreeOffice 6.2.2 inosvika ne50 bug fixes yakawanikwa mushanduro yapfuura, mazhinji acho akagadzirisa nekuda kwekubatana kwenharaunda. Hechino chikuru chinhu nezve yakavhurika-sosi software: chero munhu anogona kuchera mukodhi uye kubatsira kuvandudza software. Idzi gadziridzo dzinotsanangurwa mune ruzivo rweRC1 uye RC2 yatinokwanisa kuwana kubva pano y pano.
LibreOffice 6.2.2 inogadzirisa huwandu hwe50 bugs
Kuti uise iyo, vashandisi veLinux vane zvisarudzo zvitatu, imwe chete chaiyo panguva ino:
Kuwanikwa kurodha webhusaiti uye gadza iyo LibreOffice 6.2.2 .deb package (bato rakananga). Kamwe pasuru painotorwa pasi, tinya kaviri pairi kuti uvhure Ubuntu Software, Tsvaga (Kubuntu), GDebi kana iyo yekumisikidza yako yaunofarira kugoverwa kweDebian / Ubuntu.
Mirira mazuva mashoma uye gadza iyo snap package. Ramba uchifunga kuti zvinokurudzirwa kutanga kusunungura iyo APT vhezheni kuti udzivise matambudziko. Mapakeji mapakeji ibudiriro, asi ivo vachiri kugona kupa mamwe masisitimu ekubatanidza masystem.
Mira zvishoma uye isa iyo APT vhezheni. Kana zvisiri zvekukurumidzira, ndinofunga iyi ndiyo yakanakisa uye yakasununguka sarudzo.
Wakatove waisa LibreOffice 6.2.2? Chii chawakaona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice 6.2.2 ikozvino yave kuwanikwa, inosvika ine bug fixes
LaTeX ndiyo imwe nzira kune Adobe InDesign?